Tanjona any West Texas
Ny faritra midadasika any Andrefana Texas dia ahitana karazam-borona manintona mahatalanjona. Ny tany efitra, tendrombohitra, canyons, farihy ary eny amin'ny renirano lehibe indrindra ao amin'ny fanjakana dia hita any amin'ny faritra. Manana tanàna sy vohitra tsy manam-pahaizana ihany koa i West Texas, ary ny sasany dia mbola tsy nahita fianarana toa an'i Marfa Lights malaza. Raha fintinina, dia tsy manan-tsahala ny West Texas fa mihamitombo.
Miorina eo amin'ny "fitongilana lehibe" ao amin'ny Reniranon'i Rio Grande, ny National Park Big Bend dia iray amin'ireo faritra lehibe indrindra amin'ny toeram-pialam-boly any ivelany. Hikirakira, mitaingina, fanjonoana, vorona, bisikileta mitaingina, rafting, kayak, fijerena ny natiora (ny trano fonenan'ny liona any an-tendrombohitra, bara mainty hoditra, ary karazany maro hafa) Feno populaire ny vatolampy sy ny fôsily, na dia tsy misy fakantsary aza afaka esorina ao amin'ilay valan-javaboary. Ny Valan-java-boahary Big Bend dia tena lehibe ka afaka manam-bintana mpitsidika dimy ao anatin'io kianja io izy, ny roa amin'izy ireo dia taona misokatra manodidina. Raha tianao ny miala am-bavahady, dia tsy afaka manadino fahafahana hitsidika Big Bend ianao.
Miorina amin'ny tantara sy ny hatsaran-tarehy voajanahary ny Hueco Tanks State Park. Trano fonenana ho an'ny sasany amin'ireo sarimihetsika malaza indrindra any Amerika Avaratra, ny sasany amin'izy ireo dia miverina amin'ny vanim-potoana talohan'ny vanim-potoana taloha, ny Hueco Tanks koa dia toeran'ny ady farany indiana any amin'ny faritr'i El Paso. Amin'izao fotoana izao, ny zaridaina, izay miorina fohy avy any El Paso, dia manisa mpitsidika marim-pototra, ny ankamaroan'izy ireo dia tonga hijery ireo sary an-johy. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia lasa hetsika malaza ao amin'ny Hueco Tanks State Park ny rock climbing ary avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana no hiakarana ny kliobera mba hiakatra eto.
El Zoo Zoo
Any amin'ny faritra andrefan'ny ankamaroan'ny tanàna any Texas, ny Zoo El Paso dia iray amin'ireo sekretera tsara indrindra an'ny fanjakana. Io zoo mahavariana mahavariana io dia mandrakotra mihoatra ny 35 hektara ary ahitana karazana biby maherin'ny 220. Ny sivy fampirantiana ao amin'ny zoo dia sokajy ho fizarana telo: Ny biby any Afrika, ny biby any Azia ary ny biby any Amerika. Na dia tsy mahatsikaritra matetika aza, ny El Paso Zoo dia iray amin'ireo zo mahavariana indrindra ao amin'ny Lone Star State.
Voalaza aloha fa tamin'ny taona 1883 dia niseho ireo alina ireo Marfa Lights mistery satria nanomboka nahita azy ireo ary mbola tsy misy olona afaka manazava izany tranga izany. Nandritra ny taona maro (ary am-polo taona sy am-polo taonany) hatramin'ny nisian'izy ireo voalohany, nanjary lasa sary an-tsaina ny kolontsaina malaza ny Marfa Lights. Today. mpitsidika an 'arivony no mandeha mankany amin'io tanàna kely any Texas io isan-taona mba hijery io fahazavana tsy hay hazavaina io. Any ivelan'ny tanànan'i Marfa, ny kianjan'ny Marfa Lights Viewing, izay mamela ireo mpitsidika hipetraka any amin'ny toerana iray tsara indrindra hijerena ny jiro raha miseho izy ireo. Ny tanàna ihany koa dia manomana fety isan-taona "Marfa Lights Festival".
Ao anatin'ny programa fikarohana momba ny astronomie ao amin'ny Oniversiten'i Texas, ny McDonald Observatory dia ampahany manan-danja amin'ny ezaka hahatakarana ny toerana lalina. Ary, misokatra ho an'ny besinimaro izany! Mipetraka ivelan'i Ft Davis, ny McDonald Observatory dia manana telescopes mahery mivezivezy eo an-tampon'ny Tendrombohitra Locke sy ny Tendrombohitra Fowlkes. Ny Observatory dia ahitana teleskaopy mahery sivy ambiny folo, anisan'izany ny teleskaopy Hobby-Eberly, izay iray amin'ireo teleskaopy lehibe indrindra eran-tany, ary ny telozoro Otto Struve, ny teleskaopy voalohany lehibe natsangana tao amin'ny McDonald Observatory, izay naorina teo anelanelan'ny 1933-39 . Ny McDonald Observatory ihany koa dia miasa ao amin'ny Center Center Visit Center Frank N Bash, izay ahitana programa fanabeazana, teatra, café, fivarotana fanomezana ary maro hafa.
Fetiben'ny Texas sy ny hetsika tamin'ny volana Aogositra
Lisansa sy lalàna momba ny fandefasan'i Texas
Fivarotana tany San Marcos
Toeram-pialam-boly an-kalamanjana any Texas
Ny zavatra tokony hataonao ao amin'ny Star Star State mandritra ny ririnina
Inona no tokony atao any Lolla: Fisehoan-javatra hafa any Chicago
Tranombakoka kely any amin'ny tanàn-dehibe: ny Society of Hispanic
Marari Beach ao Kerala: Torolalana ho an'ny Travel Travel
10 antony hitsidihana ny Phoenix amin'ny fahavaratra
Andro mahafinaritra - Fetim-pirenena niorina tany Cleveland
DC Capital Fair 2017: Karnavalin'ny Summer ao amin'ny RFK Stadium
Fomba 4 hamonjena ny vola amin'ny dia
Gazetiboky LGBT sy gazety tao New York City
9 Zavatra Mahavariana Momba ny Rindrina Seva ao Seattle
Favorite Rooms of Las Vegas: Aria Las Vegas Corner Suite
Ny Fetiben'ny Tsimbadika: ny fankalazana ny fetibe karnavonan'i Barbados
Ireo Hotel Alternatives dia fomba mahafinaritra hamonjena vola any Angletera
Aiza no ahatongavana any amin'ny faran'ny herinandro
Toro-hevitra sy toro-hevitra momba ny fitsidihana any London